आँखा दुख्ने, चिउलाने भयो भन्दै, अस्पताल पुगेका एक व्यक्तिको आँखामा भेटियो जुका ! डाक्टरनै चकित ![भिडियो सहित] – iNews16
एजेन्सी– अहिले सामाजिक संजाल साथै अन्तराष्ट्रिय संचार माध्यममा एक समाचार भाइरल भएको छ। प्राप्त जानकारी अनुसार एक व्यक्तिको आँखाबाट जुका निकालिएको थियो।
आफ्नो आँखा चिलायो भन्दा अस्पताल पुगेका उनलाई चिकित्सकहरुले आँखामा जुका फेला पारेका थिए। घ’टना भारतको भएको बुझिएको छ। धेरै समय देखि आँखा दुख्ने र चिलाउने स’मस्याले ग्रसित उनी अस्पताल पुगे पछि उनको आँखामा जुका परेको खुलासा भएको हो।
पि’डितको आँखाबाट जुका निकाल्दै गरेको भिडियो अहिले सामाजिक संजालमा भाइरलनै बनेको छ। भिडियोमा चिकित्सक एक व्यक्ति आँखाको स’र्जरी गर्दै गरेको देख्न सकिन्छ।
आँखाबाट चिकितासकले लगभग १५ सेन्टिमिटर लामो जुका निकालेको दृश्य पनि भिडियोमा देख्न सकिन्छ। सर्जरिमा संलग्न चिकित्सकले बताए अनुसार समयमानै उक्त व्यक्तिको आँखाबाट जुका ननिकालिएको भए पि’डित व्यक्तिले केहि दिनमानै ज्योति ‘गु’माउने थिए।
चिकित्सकहरुले आँखाबाट जुका निकाल्न भन्दा पनि उक्त जुकालाई आँखाबाट जीउँदै निकाल्नुलाई ठूलो चु’नौतीको रुपमा लिएका थिए। यदि जुकाको आँखामै मृ’त्यु भएको भए पि’डित व्यक्तिको आँखामा अन्य इन्फेक्सनको जो’खिम पनि थियो।
चिकित्सकहरुले गरेको सफल स’र्जरी पछि पि’डित व्यक्ति अहिले स्वस्थ रहेका छन्। यति धेरै लामो जुका आँखाबाट निकालिएको विश्वमा सम्भवत पहिलो घ’टना भएको स’र्जरिमा सं’लग्न चिकित्सकको भनाइ रहेको छ।
Previous काठमाडौं उपत्यकामा निषेधाज्ञा जारीः के गर्न पाईन्छ के पाइदैन ?
Next ९ महिनाको बच्चालाइ एउटा कोठामा सु’ताएर अर्को कोठामा ग’रे द’म्पतीले दे’हत्या’ग
By user user 43 mins ago
By user user 54 mins ago
By user user 56 mins ago